Fitsapana ny Eufy 2K Pan and Tilt, fakan-tsary tsara amin'ny vidiny | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | HomeKit, maro
Ny fametrahana rafitra fanaraha-maso horonan-tsary dia mora kokoa noho ny hatramin'izay noho ny HomeKit Secure Video, ary tena mora ihany koa nefa tsy ataontsika amin'ny fakantsary fakan-tsary 2K Pan and Tilt tena mahaliana avy any Eufy izay hofakafakainay amin'ity lahatsoratra ity amin'ny horonan-tsary.
2 Eufy Security, fampiharana tsara indrindra.
Eufy dia mbola tsy sarotra tamin'ny fanapahan-kevitra momba ny famolavolana ity fakantsary ity, izay tsy voatery ho zavatra ratsy ihany koa. Amin'ny farany, fakan-tsarimihetsika iray no tokony hitovy aminy, satria anisan'ny iraka ampanaovina azy ny misoroka izay mety ho fandrahonana mety hitranga. Ny endriny mahazatra dia misy ny singa fototra amin'ny fakantsary: ​​ny LED status, ny mpandahateny ao an-damosina, ny microUSB connecteur ary ny bokotra reset, ary koa ny solomaso mihetsika ary ny loha mihodina izay mamela ny fakantsary mihetsika ao anaty fakantsary. ary famaky mitsivalana, na mandeha ho azy na mampiasa tanana ilay app.
Ny boaty dia ahitana ny charger sy ny cable microUSB, ary ny base hahafahana mametraka azy eo amin'ny valindrihana, miaraka amina kofehy mahazatra azontsika ampiasaina hametrahana azy eo amin'ny rindrina (mampiasa adaptatera izay tsy tafiditra ao). Azontsika atao ny mametraka ny fakantsary mijidina amin'ny faritra rehetra na mivadika amin'ny valindrihana, tsy azo apetraka mitsivalana. Ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra WiFi antsika dia vita amin'ny alàlan'ny tamba-jotra 2,4GHz, ary tsy manana bateria tafiditra izy io, noho izany dia ilaina foana ny manana plug eo akaiky eo. Andininy iray hafa koa tokony ho raisina dia ny tsy namboarina hampiasaina ety ivelany, noho izany dia tsy maintsy misafidy faritra arovana tsara amin'ny masoandro, orana ary hatsiaka mivantana isika raha te hametraka azy ivelan'ny trano, na ao an-trano mivantana.
Miatrika fakan-tsary misy fehin-kevitra 2K izahay, izany hoe indroa FullHD, na dia ampiasaintsika amin'ny HomeKit Secure Video aza izany dia hoferana ho FullHD (zavatra avy amin'ny HomeKit). Ny kalitaon'ny sary dia tena tsara, miaraka amin'ny zoro 125 degre, izay mety ho tery, saingy tsy azontsika hadino izany fakantsary misy motera io ka mihoatra ny mahasolo ny tsy fahitana zoro io. Mazava ho azy fa ao anatin'izany ny fahitana amin'ny alina, mikrô hihaino ny zava-mitranga rehetra amin'ny lafiny iray sy ny mpandahateny hahafahanao miteny amin'ny alalany, ary koa ny fanairana amin'ny alàlan'ny tanana na mandeha ho azy Ny fitehirizana dia azo atao mivantana ao a karatra microSD (hatramin'ny 128GB) na amin'ny rahona, na amin'ny HomeKit Secure Video na amin'ny serivisy cloud natolotr'i Eufy (ny serivisy fandoavam-bola tokana ho hitantsika amin'ity fakantsary ity).
Eufy Security, fampiharana tsara indrindra.
Ny fakan-tsary fiarovana dia tsy misy raha tsy fampiharana tsara hiaraka aminy, ary eto i Eufy dia nanao asa tena tsara, nanolotra rindranasa (rohy) miaraka amin'ny safidy tena mandroso izay andefasan'ny serivisy hafa amin'ny sarany isam-bolana, ary manome maimaimpoana tanteraka i Eufy rehefa mividy ny fakantsarinao. Fahafantarana ny tarehy, faharanitan-tsaina artifisialy ahafahanao manavaka ny olombelona na ny biby, ny fanovana fanjakana arakaraka ny toerana misy anao (ao anatiny na ivelan'ny trano), ny fitomaniana, ny faritry ny hetsika, ny fanarahan-dia… Tena tsy misy zavatra tsy haiko. Eufy ihany no miantoka ny fitehirizana rahona, tsy voatery raha tsy afaka misafidy fitahirizana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny microSD ianao.
Zavatra nanaitra ahy rehefa nizaha ny fakan-tsary dia ny manolotra anao ny asan'ny firaketana feo izay hilalao ho azy rehefa mahita biby miditra ao amin'ny faritra iray napetrakao ianao. Alao an-tsaina hoe reraka ianao miakatra amin'ny sofa ny alikanao, satria rehefa hitan'ny fakan-tsary dia hilalao azy avy hatrany ny feonao mandidy azy hiala amin'ny sofa. Te-hahita ny endrik'ilay alika aho. Ny fibaikoana ny fakantsary dia totalin'ny fampiharana, ahafahantsika mifehy ny fihetsiketsehana, na dia ny fanaingoana aza noho ny fihodinan'ny 360º. Ny fampandrenesana marani-tsaina sy ny rafitra fanairana dia mandeha tsara, tsy mbola nisy fanairana diso hatrizay nampiasako azy.
Betsaka ny safidy atolotry ny Eufy Security aminay ka saika hadinonao ny mifanentana amin'ny HomeKit Secure Video. Ity serivisy Apple ity dia avelao hitadidy izany isika manolotra tahiry fakantsary tokana ho an'ny drafitra 200GB ary fakan-tsary hatramin'ny 5 ho an'ny drafitra 2TB, fitehirizana horonan-tsary izay tsy hanisa ny fetran'ny habakabakao. Ho fanampin'ny fitahirizana rahona, Apple dia manome fampandrenesana marani-tsaina antsika arakaraka ny toerana misy azy amin'ny fakantsary rehetra mifanaraka aminy, ny fahitana ny olona, ​​ny biby na ny fiara, ny fanekena ny tarehy, ny faritra misy ny hetsika ... ny ankamaroan'ny asa nolazaiko anao teo amin'ny app Eufy. Saingy amin'ny HomeKit Secure Video dia tsy miraharaha ny fakantsary sy ny marika izahay, afaka mampifangaro fakan-tsary samy hafa amin'ny marika samy hafa izahay, ary amin'ny app Eufy dia tsy afaka miatrika fakantsary Eufy mifanentana afa-tsy izahay. Ankoatr'izay, ny fampidirana amin'ireo fitaovana Apple rehetra dia avy amin'ny app Home.
Miaraka amin'ny HomeKit Secure Video dia tsy voafehintsika intsony ny fivezivezin'ny fakantsary, saingy satria afaka manohy mitazona ny fampiharana Eufy Security izahay, dia tsy olana lehibe ihany koa izany. Mba hanampiana ny fakantsary amin'ny HomeKit dia tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny Eufy Security aloha ary avy eo, apetraho amin'ny HomeKit ilay app, Ny fitazonana ireo rindranasa roa dia azo atao tsara ary koa ny tena atolotra indrindra, dia mitazona ny tsara indrindra amin'ireo serivisy roa izahay.
Eufy dia miloka mafy amin'ny fakantsary fiarovana azy, ary manao izany amin'ny alàlan'ny fanolorana fonosana rindrambaiko finday tena tsara amin'ny vidiny tena mahaliana, ary tsy misy karazana saram-bola isam-bolana hankafizana ireo safidy azo antoka indrindra. Ny fampifanarahana amin'ny HomeKit Secure Video dia bonus ihany koa ho an'ireo izay maniry hampiasa ny sehatry ny automatisation an'i Apple home. Ary nitahiry ny tsara indrindra ho an'ny farany aho: ny vidiny € 49,99 amin'ny Amazon (rohy)
Eufy 2K Pan sy Tilt
Mifanaraka amin'ny horonantsary azo antoka Homekit
Tsy mety amin'ny any ivelany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » HomeKit » Fitsapana ny Eufy 2K Pan sy Tilt, fakan-tsary tsara amin'ny vidiny lafo
Misaotra tamin'ny famerenana, feno tanteraka.
Fanontaniana ara-teknika: tsy maintsy ampiarahina amin'ny wifi 2.4 Ghz izy, fa rehefa mifandray amin'ny fitaovanao amin'ny wifi 5 Ghz manana fidirana amin'ireo sary ve ianao? Sa mila manana wifi mitovy amin'ny fakantsary (2.4 Ghz) ve ianao? Misaotra tamin'ny valinteninao.
Raha vao voalamina dia tsy maninona
Misaotra ny valiny Luis.
Anarana iombonana dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray momba ny zavatra novakiako tamin'ny hevitro. Nilaza izy ireo fa raha mampifandray azy amin'ny Homekit ianao dia tsy afaka mampiasa azy io amin'ny fampiharana azy manokana, marina ve izany? Moa ve izany amin'ny famakafakana dia lazainao fa azo atao izany: «Miaraka amin'ny HomeKit Secure Video dia tsy voafehintsika intsony ny fivezivezin'ny fakantsary, saingy satria afaka manohy mitazona ny fampiharana Eufy Security izahay, dia tsy olana lehibe ihany koa izany. Mba hampidirana ny fakantsary amin'ny HomeKit dia tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny Eufy Security aloha, avy eo, avy amin'ilay fampiharana dia ampitao amin'ny HomeKit. Ny fitazonana ireo rindranasa roa dia azo atao tsara ary koa ny tena atolotra indrindra, dia mitazona ny tsara indrindra amin'ireo serivisy roa izahay.
Valiny ho an'ny Holandey
IOS 14.3 beta dia mamela anao handefa fampiharana miaraka amina sary masina manokana